आज धनतेरस : के-के किनिन्छ धनतेरसका दिन ? थाहा पाउनुस « Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०७८, मंगलवार ०८:०५
१६ कार्तिक, काठमाडौं । आज धनतेरससँगै हिन्दुहरूको दोस्रो महान् चाडको रूपमा रहेको तिहारले पनि पाइला टेकेको छ । यस दिन विशेष रूपमा भगवान् धन्वन्तरीको पूजा आराधना गरिन्छ साथै धनका देवता कुवेर तथा लक्ष्मीको पनि पूजा आराधना गरिन्छ । समुद्र मन्थनको क्रममा यसै दिन भगवान् धन्वन्तरी हातमा अमृतको कलश लिएर प्रकट भएका थिए ।
के-के किनिन्छ यस दिन ?
आजदेखि भाइटीकाको दिनसम्म व्यवसाय तथा व्यक्तिगत कारोबारमा उधारो गर्दा अशुभ हुने जनविश्वाससमेत रहेको छ । आजकै दिनदेखि तिहार सुरु भए पनि तिथिमा परेको घटबढका कारण भोलि ९बुधबार० नै काग तिहार र कुकुर तिहार मनाइँदै छ ।